ဂျင်းဘောင်ဘီ အကြပ်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲလေး ဆိုးထားတဲ့ အသည်း တယားယား ဖြစ်သွားစေ မယ့် ဘေဘီမောင် ရဲ့ အမိုက်စား VIDEO…. – Shwe Naung
ဂျင်းဘောင်ဘီ အကြပ်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲလေး ဆိုးထားတဲ့ အသည်း တယားယား ဖြစ်သွားစေ မယ့် ဘေဘီမောင် ရဲ့ အမိုက်စား VIDEO….
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဘေဘီမောင်ဟာ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေတိုင်း ကိုလည်း ပရိသတ် တွေကို ဝေမျှ ပေးလေ့ ရှိရာ မကြာ သေးခင် နာရီပိုင်းလောက် ကလည်း ဘေဘီမောင်ရဲ့ Tik Tok အကောင့်မှာ ဗီဒီယို လေး တစ်ခု တင် ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကိုယ်လုံးလေး လှုပ်လှုပ်ပြီး ညှို့အား ပြင်းပြင်း နဲ့ ကနေတဲ့ ဘေဘီမောင် ရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok Video လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ဝါသနာ ပါလွန်းတာ ကြောင့် အနုပညာ မျိုးရိုး မရှိဘဲ ကိုယ့်ဒူး ကိုယ်ချွန်ကာ ကြိုးစားခဲ့ပြီး လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိထား သူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ဘေဘီမောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ မော်ဒယ် လောကမှ တစ်ဆင့် သရုပ်ဆောင် ဘက်သို့ ကူးပြောင်းလာ ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးကြီး ပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကြောင့်လည်း ပုရိသတွေက ကြွေပြီးရင်း ကြွေနေ ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ မိသားစု ထဲတွင် အကြီးဆုံးသ မီးဖြစ် တာကြောင့် မိဘတွေ ကိုလည်း လိုလေ သေးမရှိအောင် အနီးကပ်ပြုစု စောင့်ရှောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခြားစီး ပွားရေးတွေကို လည်း ချဲ့ထွင် လုပ်ကိုင် နေတာကြောင့် အောင်မြင် မှုတွေ ရရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအားလုံး ကလည်း သူမရဲ့ စိတ်ထား ဖြူစင်တာ လေးကို ချီးကျုးနေ ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။